Isikhokelo esiBanzi sokuSebenzisa i-LinkedIn Sales Navigator | Martech Zone
Isikhokelo esiBanzi sokuSebenzisa i-LinkedIn yokuThengisa isiKhangeli
NgoLwesibini, nge-15 kaDisemba ngo-2020 NgoLwesibini, nge-15 kaDisemba ngo-2020 UStefan Smulders
I-LinkedIn iguqule indlela amashishini adibana ngayo. Yenza okuninzi kweli qonga ngokusebenzisa isixhobo sayo sokuThengisa iNavy.
Amashishini namhlanje, nokuba makhulu okanye mancinci kangakanani, axhomekeke kwi-LinkedIn yokuqesha abantu kwihlabathi liphela. Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-720, eli qonga likhula mihla le ngobukhulu kunye nexabiso. Ngaphandle kokugaya, i-LinkedIn ngoku yeyona nto iphambili kubathengisi abanqwenela ukunyusa umdlalo wabo wentengiso yedijithali. Ukuqala ngokwakha unxibelelwano ekuveliseni izikhokelo kunye nokwenza ixabiso elingcono lebhrendi, abathengisi baqwalasele i-LinkedIn ukongeza okungabalulekanga kuyo yonke qhinga urhwebo.
Unxibelelwano kwiNtengiso ye-B2B
Phakathi kwezinye izinto, i-LinkedIn inefuthe elikhulu kwintengiso ye-B2B. Phantse izigidi ezingama-700 zamashishini avela kumazwe angama-200 + akhoyo kweli qonga, ngoku isisibonelelo esibaluleke kakhulu kumashishini e-B2B. Isifundo sibonisa ukuba 94% yabathengisi be-B2B Sebenzisa i-LinkedIn ukusasaza umxholo wabo. Abasunguli beenkampani ze-B2B kunye nee-CEO bazama ukuba Abaphembeleli abanxibelelanayo ngokwakha uphawu lwabo lobuqu kunye nezithuba zokubhala amabali ukwandisa ukufikelela kwezinto eziphilayo, ukuphucula ulwazi lwe-brand, kwaye ngenxa yoko, ukukhulisa ukuthengisa.
Abameli bezentengiso abekho ngasemva, bakha ii-funnels zentengiso kwi-LinkedIn ekugqibeleni ekhokelela kwisizukulwane esiphezulu sentengiso. I-Navigator yokuThengisa, isixhobo esenziwe yi-LinkedIn sasenzelwe ukuthatha le nkqubo iye kwinqanaba elilandelayo. I-LinkedIn Sales Navigator ifana nohlobo olukhethekileyo lwe-LinkedIn uqobo. Ngelixa i-LinkedIn sele ilungile kwintengiso yentlalontle, iNavigator yokuThengisa inikezela ngeendlela ezininzi eziza kukuvumela ukuba ufumane amathemba ngokukhawuleza kwi-niche yakho.
Ngaphandle kokuqhubeka, nantsi isikhokelo esikhawulezayo sokukunceda ukuba uqalise ngesi sixhobo.
Yintoni i-LinkedIn Sales Navigator?
I-LinkedIn Sales Navigator sisixhobo sokuthengisa sentlalo esenza ukuba kube lula kuwe ukufumana amathuba afanelekileyo eshishini lakho. Yenza njalo ngokunikezela ngokuhluza okunzulu ngokusekwe kwiinkcukacha zomsebenzisi ekuvumela ukuba uqhubeke nokhangelo oluphambili ekufumaneni amathemba ngqo owafunayo.
Sebenzisa i-Sales Navigator, abameli bezentengiso bakhangele kwizikhokelo eziphambili, babeke iliso kwimisebenzi yabo, kwaye bajonge abafowunelwa abafanayo abanokufikelela kubo. Oku kubenza ukuba babe linyathelo eliphambili kumdlalo wabo ngokwakha imibhobho esebenzayo yokuvelisa ukuthengisa okungcono.
Imisebenzi yokuthengisa yale mihla (kwaye siyayithanda). Abasebenzisi beN Navigator yokuthengisa bafumana ukuphakanyiswa kwe-7% kwinqanaba lokuphumelela kwimisebenzi yokuthengisa yanamhlanje.
USakshi Mehta, uMphathi oPhezulu weNtengiso yeMveliso, iLinkedIn
Ngaphambi kokuntywila ekusebenziseni, makhe sijonge ukuba ingaba iNtengiso ye-Navigator yenzelwe wena okanye hayi.
Ngubani omele ukuSebenzisa i-LinkedIn yokuThengisa isiKhangeli?
I-LinkedIn Sales Navigator yile nto uyifunayo ukuba ungumthengisi we-B2B.
I-Navigator yokuThengisa yimveliso ehlawulelweyo efumanekayo kuye wonke umntu okwi-LinkedIn. Imirhumo ingahluka. Unokukhetha umntu othile, iqela, okanye imodeli yobhaliso lweshishini ngokweemfuno zakho kunye nobungakanani benkampani yakho.
I-LinkedIn Sales Navigator iyasivumela ukuba sifumane abanini beshishini kumbutho kwaye sifike kubo ngaphambi kokuba bajonge iimveliso ezintandathu ezahlukeneyo zokubenza babone iingxaki zabo ngokwahlukileyo kwaye ekugqibeleni baqonde ukuba sisona sisombululo sisiso.
U-Ed McQuiston, uVP weNtengiso yeHlabathi, isoftware yeHyland
Yazi ukuba iHyland, iAkamai Technologies, kunye neGuardian zisebenzise njani i-LinkedIn Sales Navigator kwintengiso yentlalo.
Uyisebenzisa njani i-LinkedIn yokuthengisa Navigator
Ukuqala kwiziseko zeNtengiso ye-Navigator ukwenza okuninzi kwesi sixhobo ngo-2020, sikukhusele kuzo zonke iinkalo. Nantsi indlela oqala ngayo ekuqaleni.
1. Qalisa ityala lakho lasimahla
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuya kwifayile ye- Iphepha lokuKhangela iNjineli kwaye nqakraza Qalisa ukulingwa kwakho simahla ukhetho. I-LinkedIn ikuvumela ukuba usebenzise Intengiso yokuKhangela mahala kwiintsuku ezingama-30. Ke, qiniseka ukuba uyisebenzisa ngokupheleleyo loo nto kwinyanga yakho yokuqala.
Kuya kufuneka unikezele ngolwazi lwekhadi lakho letyala ukuze ubhalisele esi sibonelelo. Ukongeza, awuyi kuhlawuliswa nantoni na ukuba urhoxisa umrhumo wakho ngaphambi kokuba ixesha lokulingwa liphele.
Uya kuthi ke ubhekiswe kwiwebhusayithi yokuThengisa isiKhangeli, kwaye liqonga elahlukileyo ngokwalo. Nantoni na oyenzayo apha ayizukuchaphazela iakhawunti yakho yesiqhelo ye-LinkedIn.
2. Cwangcisa iAkhawunti yakho
Nje ukuba ubhalisele iakhawunti, kuya kufuneka usete ukhetho lwakho ngokufanelekileyo.
Unokwenza iakhawunti yakho yokuThengisa i-Navigator ukuseta izinto ozikhethayo ezinje ngezihloko zomsebenzi, ii-verticals, kunye nemimandla ofuna ukujolisa kuyo.
Ekuqaleni, iNavy Navigator iya kukunika ukhetho lokugcina uqhagamshelo lwakho lwe-LinkedIn esele lukhona. Ukongeza, unokuvumelanisa i-Sales Navigator kunye ne-Salesforce okanye iMicrosoft Dynamics 365 yokungenisa bonke abafowunelwa kunye neeakhawunti. Kukho nezinye iindlela ezininzi onokukhetha kuzo dibanisa i-LinkedIn nezinye ii -apps ukuba usebenzisa ezinye iiCRMs.
Okwangoku, ugqibile ngenxalenye yokuqala yokumisela iakhawunti yakho. Ngoku unokujonga kwaye ugcine iinkampani zokuThengisa i-Navigator. Ukugcina inkampani kwiakhawunti yakho kukuvumela ukuba ulandele uhlaziyo, ukulandelela umkhondo omtsha, kunye nokufumana iindaba ezithile zenkampani.
Oku kukugcina unolwazi ngaphambi kwengxoxo yakho yokuqala kunye nomthengi onokubakho. Nangona kunjalo, ukuba awukaqiniseki ukuba zeziphi iinkampani oza kuzigcina, ungatsiba eli candelo kwaye ulongeze kamva.
Okokugqibela, kuya kufuneka ugcwalise ulwazi malunga nokuba zeziphi iintlobo zezikhokelo ozifunayo. Kule nto, ungafaka ulwazi malunga nommandla wakho wokuthengisa, iimfuno zoshishino, kunye nemisebenzi ojolise kuyo.
3. Khangela iLothe neThemba
Into elandelayo ekufuneka uyenzile wakube ugqibile kukhetho lweakhawunti yakho kukukhangela amathemba kunye nokwakha uluhlu olukhokelayo. Indlela elula yokwenza oku kukusebenzisa i-Lead Builder -isixhobo esikwi-Sales Navigator enika izihluzi eziphambili zokukhangela. Nabani na usebenzisa i-Sales Navigator, ukwazi ukusebenzisa iLakhi yoMakhi linyathelo elibalulekileyo.
Ukucokisa iikhrayitheriya zakho zokukhangela, unokukhangela izihloko ezithile zomsebenzi okanye iinkampani. Xa ugqibile ukuseta iiparameter zokukhangela, cofa kwindawo yokukhangela ukuze ubone iziphumo. I-Navigator yokuthengisa iya kukunika idatha ethe kratya kwiziphumo zayo kunokuba ungafumana kuhlobo oluqhelekileyo lwe-LinkedIn.
Kanye ecaleni kwazo zonke iziphumo, uya kufumana i- Gcina njengeNkokeli ukhetho. Ungayisebenzisa le nto ukugcina amathemba afanelekileyo. Khangela amathemba akho ngobulumko endaweni yokukhetha abantu abangahleliyo kwi-bat.
Inyathelo elilandelayo kukugcina isikhokelo kwiakhawunti. Apha, iiakhawunti bhekisa kwiinkampani ofuna ukuzilandela ukugcina uphuhliso lwamva nje.
Kwicala lasekhohlo lephepha, uya kufumana iindlela ezininzi zokucoca, kubandakanya umzi-mveliso, ukutyunjwa, igama kunye nefani yokugqibela, ikhowudi yeposi, ubungakanani benkampani, inqanaba labadala kunye neminyaka yamava.
Ukongeza, iNavy Navigator ikwabonelela ngento ebizwa ngokuba yiQelaLink. Ungasebenzisa iQelaLink ukucoca iziphumo zakho ukujonga unxibelelwano lwebhanti okanye iqela. Ukuba iQelaLink liqaphela unxibelelwano lomntu phakathi kwethemba lakho kunye nelungu leqela, unokucela unxibelelwano lwakho olufanayo kwisingeniso. Okokugqibela, emva kokuba ungeze amathemba njengezikhokelo, uya kuba nakho ukuwajonga kwiTebhu yeZikhokelo.
4. Uluhlu lweefilitha zeNtengiso
Kwiphepha leseto leprofayile yakho yokuThengisa, uza kubona uKhetho lweNtengiso phakathi. Ukusuka apha, unganciphisa uluhlu lwakho lwabathengi ngokusekwe kumzi mveliso, iJografi, umsebenzi, kunye nobungakanani benkampani.
Olu khetho luya kubonakala nanini na xa ujonga iprofayili yethemba. Kwaye i-LinkedIn iya kukubonisa izikhokelo ezikhokelayo ngokubhekisele kukhetho oseteyo.
Esi sesona senzo sisebenza ngokukuko kwiNqanawa yokuThengisa. Unako kwakhona ukuqhuba uphando oluphambili kuzo naziphi na izikhokelo okanye iiakhawunti. Zingaphezulu kwe-20 izihluzi zokukhangela onokuzisebenzisa kukhangelo lwakho. Oku kubandakanya amagama aphambili, isihloko, amasimi enkampani nokunye okuninzi.
5. Jonga kwiiNkokeli zakho eziGciniweyo
Kwiphepha lasekhaya leNtengiso ye-Navigator, ungalandelela lonke uhlaziyo lwamva nje kunye neendaba ezifanelekileyo kwizikhokelo zakho ezigciniweyo. Into emnandi malunga neNtengiso ye-Navigator kukuba ungabona uhlaziyo nakubantu abangadibananga nawe. Ngalo lonke olu lwazi kumathemba akho, ungabhala ngcono imiyalezo ye-imeyile (imiyalezo ngqo) ukuze ubabandakanye.
Kwakhona, ukuba ufuna ukunciphisa indawo yokuhlaziya, sebenzisa ezo zihluzo kwicala lasekunene lephepha. Kwithebhu yeeAkhawunti, uya kuba nakho ukubona uluhlu lweenkampani ozigcinileyo. Ukwazi ngakumbi malunga nenkampani, cofa kwi-Akhawunti yokujonga ukhetho. Apho, unokufumana kunye nokongeza abantu abaninzi kwaye ufumane ulwazi lwamva nje malunga neenkampani zabo.
Ngaphaya koko, unokucofa kwindawo ethi 'Bonke Abasebenzi' ukubona wonke umntu osebenzela loo nkampani. Eli liphawu elihle elinomdla kuba likwenza ukwazi ukuqhagamshela nakubani na kwinkampani nangaliphi na ixesha.
6. Yakha abafowunelwa
Okwangoku, uchongiwe amathemba akho kwaye walandela ngokukuko ukukhula kwabo. Ngoku, uqhagamshelana njani nabo?
Elona cebo lilungileyo unokulithatha ukuze unxibelelane neeakhawunti zakho eziphambili kukuthumela imiyalezo efanelekileyo kunye nexesha elifanelekileyo. Ngoncedo lweNtengiso ye-Navigator, unokwazi malunga nezinto zomthengi wakho ze-LinkedIn.
Ungalazi ixesha lokufikelela kwaye ubathumele kwii-imeyile. Imiyalezo yobugcisa kunye nokwenza itemplate ngendlela emema ingxoxo eyakhayo. Kwaye lolona hlobo lwesicwangciso sokwakha ubudlelwane esivula indlela yakho eya kwimpumelelo yentengiso yoluntu.
Nangona kunjalo, i-LinkedIn Sales Navigator inenye into encinci. Kuya kufuneka ufikelele kuzo zonke izikhokelo zakho ngesandla. Oku kunokuchitha ixesha kakhulu.
Enye indlela yokuthintela lo msebenzi wokurhafisa kukuzenzekelayo kwinkqubo yemiyalezo. Ungakwenza oko ngokuncedwa sisixhobo esizisebenzelayo se-LinkedIn.
Qaphela ukuba ayizizo zonke izixhobo ezizisebenzelayo ezikhuselekileyo. Ukuba ufuna ukhuseleko kunye nokusebenza okuqinisekileyo, kungcono ukhethe Expandi yenkqubo yakho yokuthengisa esizisebenzelayo. I-Expandi iqinisekisa ukhuseleko lweakhawunti yakho ngokuphumeza umda wokhuseleko owakhelweyo kulandelo kunye nezicelo zonxibelelwano, ukuthumela imiyalezo ngaphakathi kweeyure zomsebenzi ezicwangcisiweyo, nokususa iimfumba ezilindileyo ezimileyo ngonqakrazo olunye.
Siyazi ukuba ukuthengisa kwezentlalo kunye nokukhangelwa kwezothutho kunokuba luxanduva xa ungazisebenzisi izixhobo ezifanelekileyo okanye ezona zixhobo zibalaseleyo. Sebenzisa iqonga elifana ne-LinkedIn Sales Navigator kukuvumela ukuba wakhe uluhlu olukhulu lwethemba ngokukhawuleza nangomzamo omncinci. Ungaluthatha olo luhlu kwaye ulungenise ngaphakathi kwiExpandi, eya kwenza uninzi lwemisebenzi yakho yokuchitha ixesha.
7. Lungiselela ukuqonda okuvela kwiNqanawa yokuThengisa
Kukho izinto ezininzi kwi-Sales Navigator onokuzisebenzisa kakuhle ukuba uyazi ukuzisebenzisa kakuhle. Umzekelo, ukuba ufuna isikhokelo esitsha, iNtengiso ye-Navigator inokucebisa isikhokelo ngokusekwe kulwazi lweprofayile kunye nokusetyenziswa.
Kwakhona, ukuba uthembisa ngokuthembisa kodwa ulondolozo oluphezulu, iNavigator yokuThengisa ikuvumela ukuba unike amanqaku kunye neethegi kwiprofayili yomthengi. Ikwavumelanisa neCRM yakho.
Ngapha koko, ukuba unomdla kwintengiso ye-LinkedIn engenayo, iNtengiso ye-Navigator iya kukunika ukubonakala okwandisiweyo. Ke, unokujonga ukuba ngubani osandula ukujonga iprofayile yakho. Ngale ndlela, unokwazi ukuba ngubani osele enomdla kuwe nakwintlangano yakho.
8. Nika ixabiso leThemba
Kwi-LinkedIn, amathemba azalisa ifayile ye- Inzala Icandelo leprofayile yabo liyenzela into enkulu. Ngale ndlela, bakunika uluhlu olupheleleyo lwezihloko onokuzisebenzisa njenge:
Umhlaba wengxoxo ukuqonda ngcono ubuntu babo kunye nezinto eziphambili kubo
Imephu yendlela yokuba inkampani yakho kunye neemveliso zayo zinokuhlangabezana njani neemfuno zabo
Ukwazi ukuba zeziphi izikhokelo onomdla kuzo kunye nokuqonda ukuba iimveliso zakho zingabanika njani ixabiso abalifunayo yindlela ebalaseleyo. Iya kukunika isandla esiphakamileyo ngaphezulu kwabakhuphisana nabo abangakhathali ngokwaneleyo ukuba benze indlela yabo yokukhokela.
9. Yongeza iNtengiso yokuKhangela kwiChannel
Licebo elilula elikongela ixesha elininzi kunye namandla. Ulwandiso lweChannel Navigator's Chrome yenza ukuba ubone iiprofayili ze-LinkedIn kwi-akhawunti yakho ye-Gmail. Ukongeza, olu lwandiso lunokukukhokela ngezihloko ezisebenzisa umkhenkce, ugcine umkhombandlela, kwaye ubonise idatha yeQelaLink.
Ukuba ufundile ukuza kuthi ga ngoku, kukho umbuzo omnye onokufuna ukuwubuza:
Ngaba i-LinkedIn Sales Navigator ixabisa imali yakho?
Ukuphendula ngokufutshane, ewe, kunjalo. Ngelixa amashishini amancinci kunye nemibutho yokuthengisa kufuneka kuqala bazame inguqulelo yasimahla ukuze babone ukuba kufanelekile na ukutyala imali ngalo mzuzu, amashishini amakhulu ngokuqinisekileyo kufuneka asebenzise eli qonga kwimibhobho yokuthengisa ebhetele kunye nokuhamba komsebenzi okusebenzayo.
Idemo yokuNgena kwiNdawo yokuThengisa I-Expandi LinkedIn Ukuzenzekelayo
tags: b2bUkuthengisa kwe-b2bwandisafumana izikhokelofumana izikhokelo kunye nethembafumana izikhokelo kwi-intanethifumana amathembaLinkedInikhonkco lokuthengisa elinxibelelanisiweyoImicrosoft dynamics 365umthengisi wenqanawaukuthengisa
Umrhwebi we-SaaS | Umsunguli wesoftware ekhuselekileyo yeHlabathi yeLinkedIn Automation /Expandi.io | ngaphezulu kweminyaka emi-5 uMsunguli weLeadExpress.nl
Sebenzisa i-AI yeLungelo lokushicilela iBlueOther ukuvula iiNkcukacha zoQeqesho loQhagamshelo